ကိုသာဟန် – Grab Love Story
ကျုပ်နံမယ်က သာဟန်ပါ။ နေတာက မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသက ဇရက်ကုန်း ဆိုတဲ့ ရွာကြီးမှာပါ။ ဇရက်ကုန်း ရွာက ဒေးဒရဲ နယ်ထဲမှာပါ။ ကျုပ်အသက်က အခုဆို ၄၅ နှစ်ထဲ ရောက်နေပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ငယ်ငယ်ထဲက လယ် အလုပ်၊ ချောင်းအလုပ်တွေကို လုပ်ခဲ့တဲ လူဆိုတော့ ခန္ဓာကိုယ်က တောင့်တောင့်တင်းတင်း ရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ အရက်ကို စွဲစွဲမြဲမြဲ မသောက်တတ်ပဲ တခါတရံမှ အနည်းငယ်သာ မသောက်မဖြစ်တော့မှ သောက် တတ်တော့ အခု ချိန်ထိ တော်ရုံလူငယ်တွေတောင် ကျုပ်ရဲ့ သန်မြန်မှုကို မမှီပါဘူး။ အသားအရောင်ကတော့ ခပ်ညို ညိုပါ။ အရပ်က ပုတဲ့ အရွယ်အစားထဲ မပါပါဘူး။ အဲ….တစ်ခုပြောဖို့ ကျန်သေးတယ်။ အဲဒါက ကျုပ်ကို တစ်ရွာလုံးက လက်မြန်သာဟန်လို့ ခေါ်တဲ့ဟာပါဘဲ…။ တစ်ခြားတော့ မထင်နဲ့။ ကျုပ်ဒီအသက်အရွယ်ထိ ဘယ်သူနဲ့မှ ရန်မဖြစ်ဖူးပါဘူး။ ကျုပ်ရဲ့ နာမည် အရှေ့မှာ လက်မြန် ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ထူးကြီး ထည့်ပြီး ခေါ်တာက မိန်းမကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ပါ။ ရမယ်ဆိုရင် ကျုပ်က သွက်တယ်လေ။ ကျုပ်က ကွမ်းမစား၊ ဆေးလိပ်မသောက်၊ အရက်မသောက်ပေမယ့် အဲဒီ မိန်းမတော့ ကြိုက်တယ်လေ..။ ကြိုက်တယ်ဆိုပေမယ့် ဒီအသက်အရွယ်ထိ တစ်ခါမှ ဖာမချဖူးပါဘူး။ အပျိုလေး၊ အပျိုကြီး။ တစ်ခုလပ်၊ မုဆိုးမ၊ ဆိုတဲ့မိန်းမအမျိုးအစားတွေနဲ့ ကျင်လည်ခဲ့တာပါ။ နောက်တစ်ခုက ကျုပ်ခုချိန်ထိ လင်ကြီးငုတ်တုတ်နဲ့ မိန်းမ မျိုးကို တစ်ခါမှ မပြစ်မှားခဲ့ဖူးပါဘူး။ မိန်းမတွေ ဒီလောက်များ နေတာပဲဗျာ။ သူများ မယား ဘာလို့များ
သွားချိန်နေမှာ လည်းဗျာ..။ နောက်ပြီး ကျုပ်က ချောချောလှလှ တောင့်တောင့် လေးတွေမှ ကိုင်ချင်တာဗျ။ မိန်းမဆိုပြီးရော ဆိုတဲ့စိတ် ကျုပ်မှာ မရှိပါဘူး။ နောက်ပြီးတော့ မိန်းမတစ်ယောက်ကို ကြည့်လိုက်လို့ မရနိုင်တဲ့ အခြေအနေမျိုးရှိရင် ကျုပ်ဘယ် လောက်ပဲ စိတ်ဝင်စားနေပါစေ ကျုပ်မကြိုးစားပါဘူး။ အချိန်ကုန်တယ်။ အလုပ်ရှုပ်တယ်။ စာသင်တဲ့လူ ရေဒီယိုပြင် တဲ့လူ နာရီပြင်တဲ့လူတွေဟာ ပြင်ပါများပြီး လုပ်ပါများလာရင် ဘယ်အလုပ်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကျွမ်းကျင်လာပါတယ်။ ဒီလိုပဲ ကျုပ်ကလဲ ၁၈ နှစ်သားကစပြီး မိန်းမတွေနဲ့ ကျင်လည်ခဲ့တော့ ဒီကိစ္စမှာ ကျွမ်းကျင်တယ်ပေါ့……ဗျာ…။ မိန်းမတစ်ယောက်ကို ကျုပ်တစ်ခါကြည့်လိုက်ရင် အဲဒီမိန်းမ ကျုပ်လုပ်လို့ ရမရ တစ်ခါတည်း ကျုပ်သိတယ်။ ကြွားတာ မဟုတ်ဘူး။ တကယ်ပြောတာ။ ဒီဟာလေး ကျုပ်နည်းနည်း ပြောအုံးမယ်။ ခင်ဗျားတို့လည်း နည်းလမ်းလေး ရတာပေါ့။ မိန်းမတစ်ယောက်ကို ကျုပ်ကြည့်ရင် ပတ်ဝန်းကျင်ကမသိအောင် အကြည့်ခံရတဲ့ မိန်းမပဲ သိအောင် ကြည့်တယ်။ ချောင်းကြည့်တာ မဟုတ်ဘူးနော်…။ ပြောင်ကြည့်တာ….။ ကြည့်တာကလည်း မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ အဓိက နေရာဖြစ်တဲ့ နို့နေရာ၊ တင်သားကြီးတွေ နေရာနဲ့ ပေါင်ခွ ကြား နေရာတွေကို မရှက်မကြောက် အာသာငမ်းငမ်းနဲ့ စိုက်ပြီးတော့ကို ကြည့်ပစ်လိုက်တာ။ ဒီလိုအချိန်မှာ အကြည့် ခံရတဲ့ မိန်းမက မျက်နှာပျက်ပြီး ထသွားမယ်၊ လှည့်ထွက်သွားမယ်၊ မဲ့ပြမယ် ဆိုရင် ကျုပ် အဲဒီမိန်းမကို ဆက်ပြီး မကြိုးစား တော့ပါဘူး..။ အဲ..စောစောကလို ကျုပ်ကြည့်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ မျက်နှာလေးရဲပြီး ခေါင်းငုံ့ပြီး ဆက်ရပ်နေမယ်၊ ဆက်ပြီး ထိုင်နေမယ်၊ ဆက်ပြီး အကြည့်ခံနေမယ်၊ နောက် ထွီခနဲ တံတွေးထွေးမယ် ဆိုရင် အဲဒီမိန်းမ ကျုပ်လုပ်လို့ ရပြီ..။ ဒါပေမယ့် ကြာမယ်။ အချိန်ပေးရမယ်။ သူက ကျုပ်ကို လက်ခံချင်ပေမယ့် မူနေမယ်။ ကြာကြာ အချိန်ဆွဲပြီးမှ ပေးမယ့် သူပါ..။ နောက်တစ်မျိုးက ကျုပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ မချိပြုံးတဲ့ မျက်နှာနဲ့ ချက်ချင်းပြန်ကြည့်တာမျိုး။ ရွှင်ပြတဲ့ မျက်နှာနဲ့ ကျုပ်ကို စကားတစ်ခုခု လှမ်းပြောတာမျိုး၊
ကျုပ်ကြည့်နေတာကို သိလဲသိရော မျက်လွှာလေးချထားပြီး ကျုပ်လဲ မျက်စေ့လွှဲလိုက်ရော ကျုပ်ကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ မျက်လုံးနဲ့ တစ်ချက်လောက် မျက်လုံးဝင့်ပြီး ကြည့်လိုက်တာ မျိုးတွေဆိုရင် အခုထလုပ် အခုဖြစ်တယ်..။ ဒါပေမယ့် တစ်ခုတော့ရှိတာပေါ့။ လူမြင် လူသိလို့တော့ မရဘူး။ ဆိတ်ကွယ်ရာ ရဖို့လိုတယ်။ လူသာသိလို့က တော့ ၃ နှစ်လောက် ကြိုက်ခဲ့ နေခဲ့တဲ့ ရည်းစားဖြစ်နေပါစေ၊ ပါးရိုက်ခံရရင် ခံရ မခံရရင် ထပြေးပြီး တော်တော်နဲ့ အတွေ့ခံမှာ မဟုတ်တော့ဘူး။ မိန်းမတွေ စိတ်က အဲဒီလိုမျိုး ရှိတယ်။လူမသိဘို့ အဓိကကျတယ်။ ဒီနည်းလမ်းတွေက ကျုပ်အတွက်တော့ ပုံသေနည်း တစ်ခုလို အခုအသက်အရွယ်ထိ မှန်ခဲ့တယ်..။ ခင်ဗျားတို့အတွက်တော့ မပြောတတ် ဘူး။ ဒါတွေကို ကျုပ်ကပြောတော့ ခင်ဗျားတို့က ကျုပ်ကို မိန်းမ ဘယ်နှစ်ယောက် ယူဖူးလို့လဲလို့ မေးလိမ့်မယ်။ ကျုပ်ခုချိန်ထိ ဘယ်မိန်းမကိုမှ မယူဖူးဘူး။ ယူထားပြီး အပင်ပန်းခံ လုပ်ကျွေးရလောက်အောင် မိန်းမတွေကို အထင် မကြီးလို့ပဲ။ ကျုပ်ကို လိုချင်လို့ စွဲလန်းလို့ အတူနေချင်တဲ့ မိန်းမတွေ အများကြီး ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျုပ်ကလည်း မိန်းမတွေရဲ့ အထာကို ကျွမ်းတော့ သူတို့စွဲအောင် လုပ်နိုင်တယ်လေ။ နောက်ပြီး ကျုပ်က ကျန်းမာတယ်။ သန်စွမ်းတယ်မို့လား။ နောက်ပြီးစိတ်ရှည်တယ်။ ဒီတော့ သူတို့လိုတာကို ပြည့်ဝအောင် ဖြည့်ဆည်း ပေးနိုင်တာပေါ့ဗျာ။ ကျုပ်က အတည်တကျ မိန်းမယူမထားတော့ အိမ်ထောင်မရှိဘူး..ဗျာ ။ နောက် ကျုပ်က ဇရက်ကုန်း ဇာတိမဟုတ်ဘူး။ သလပ်ခွာကနေ ကျုပ်တို့မိသားစုက ဇရက်ကုန်းကို ပြောင်း လာကြတာ။ မိသားစုဆိုပေမဲ့ များများစားစားတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အဖေရယ် အမေရယ် ကျုပ်ရယ် သုံးယောက်ထဲပါ။ အမေက ကျုပ် ၁၃ နှစ်သားမှာ ဆုံးသွားပြီး အဖေကတော့ ကျုပ် အသက်၂၀ အရောက်မှာ ဘုန်းကြီးဝတ်သွားတယ်။ ပြီးတော့ ဇာတိဖြစ်တဲ့ သလပ်ခွာရွာကို ကြွသွားပြီး သီတင်းသုံးနေတယ်..။ ဒီတော့ ဇရက်ကုန်းရွာမှာ ကျုပ်တစ်ယောက်တည်း ကျန်ခဲ့တယ်။ တစ်ကောက်ကြွက်ပေါ့…ဗျာ။ ကျုပ်က တစ်ယောက်တည်း သမားဆိုတော့ ကျုပ်သူငယ်ချင်း ဖိုးခ တို့အိမ်မှာနေတယ်။ သူငယ်ချင်းဆိုတာက ကျုပ်လမ်း လျှောက်တတ်စ အရွယ်ကတည်းက အတူနေခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းနော်။ ဖိုးခကလည်း သလပ်ခွာရွာသားပဲ။ ဇရက်ကုန်း ရောက်တော့ တစ်အိမ်တည်း အတူနေကြတာ..။ အဲဒီမှာ ကျုပ်နေတယ်။ အိမ်ကတော့ ကျုပ်အဖေ ဆောက်ပေးခဲ့တဲ့ အိမ်ပါ။ ပြီးတော့ ကျုပ်က အလုပ်ကို မပျင်းဘူး။ ရသမျှ အကုန် ဖိုးခကိုပေးတယ်။ ဒီတော့ သူတို့မိသားစုက ကျုပ်မှကျုပ်ဖြစ်ပြီး ဖိုးခနဲ့ကလည်း ညီအစ်ကိုလို ဖြစ်နေတော့ အဲဒီမှာ ကျုပ်က မြဲနေတာပေါ့…။ ဖိုးခတို့မှာ ဖိုးခအမေ ဒေါ်ရွှေရယ်၊ ဖိုးခမိန်းမ မတုတ်ရယ်၊ ဖိုးခရဲ့ သမီး ခင်ပြုံးနဲ့ ခင်မုန်းရယ်၊ ဒါပဲရှိတယ်…။ အားလုံးက ကျုပ်ကို ခင်ကြပါတယ်။
အဲ ကျုပ်အကြောင်း ပြောနေရတာနဲ့ ကျုပ်ပြောချင်တဲ့ စကားဆီ တော်တော်နဲ့ မရောက်တော့ဘူး။ ပြောချင်တာက ကျုပ် ၁၈ နှစ်သား ပထမဆုံး မိန်းမလုပ်ဖူးခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းပါပဲ။ ဆက်ပြီး နား ထောင်ကြပါအုန်း….နော်….။ တစ်နေ့တော့ ညနေစာ စားပြီး ပျင်းတာနဲ့ ကျုပ် ရွာထဲ လျှောက်လာခဲ့တယ်။ အချိန်က မှောင်ရီပျိုးနေတဲ့အချိန် တစ်နေရာ အရောက်မှာ …. “ သာဟန်….နင် ဘယ်သွားမလို့တုန်း…… ” ကျုပ်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ ကျုပ်သူငယ်ချင်း ခင်နွဲ့ဆိုတဲ့ ကောင်မပေါ့။ သူက ခြံဝမှာ ရပ်နေတယ်။ ကျုပ်တို့ ရွာက ရွာကြီး….အိမ်တိုင်းနီးပါး ခြံနဲ့ ဝန်းနဲ့ နေကြတာ…။ “ ငါလဲ….ပျင်းတာနဲ့ ထွက်လာတာဟ…… ” “ ဒါဆို…အိမ်ထဲဝင်အုန်းဟာ…..ငါပြောစရာရှိလို့… ” “ အေး…… ” ကျုပ်လဲ ခြံထဲကို ခင်နွဲ့ နောက်ကနေ ဝင်လိုက်သွားတယ်။ ကျုပ်က လူပျိုဖြစ်နေပြီဆိုတော့ ရှေ့က သွားတဲ့ ခင်နွဲ့ကို နောက်ကနေ ကြည့်မိတယ်။ သူ့တင်ပါးကြီးတွေက အိပက် အိပဲနဲ့ အသည်းယားစရာကြီး…..ဟီး ဟီး…..။ သူ့တင်ပါးကြီးတွေ လှုပ်နေတာ ကြည့်ပြီး ကျုပ်စိတ်ထဲမှာ တစ်မျိုးကြီးဗျာ…လာ ထိုင်…..သာဟန်… ” ကျုပ်က ကြမ်းပြင်ပေါ် ထိုင်ချလိုက်တယ်…။ နင့် အိမ်ကလူတွေ ဘယ်သွားကြလဲ… ” “ အစ်မတို့ လင်မယားက ခြံထဲ သွားကြတယ်… ဟိုမှာ သရက်တွေ ခူးပြီး အုပ်နေတယ်… ” သူတို့ခြံက ရွာအစွန်မှာပါ…။ အတော်လေး ဝေးတယ်. အဖွားလေးရော…ခင်နွဲ့… ” “ အမေက သူ့ညီမနဲ့ ဒေးဒရဲ လိုက်သွားတာ နှစ်ရက် ရှိပြီ… ” စကားသာပြောနေတယ်။ ခင်နွဲ့ မျက်လုံးတွေက အရင်လို မဟုတ်ပဲ စူးရှပြောင်လက်တဲ့ အကြည့်တွေနဲ့ ကျုပ်ကို ကြည့်နေတယ်။ ပြီးတော့ သူ့မျက်နှာက တစ်မျိုးပဲ…။ “ နင်ငါ့ကို ဘာပြောမလို့တုံး… ” “ ပြော…..ပြောပါ့မယ်… ” ချက်ချင်းပဲ ခင်နွဲ့အသံက ငိုသံပါလာတယ်။ ပြီးတော့ သူက ကျုပ်နဲ့ လူလုံးချင်း ထိအောင် တိုးကပ်ပြီး ထိုင် လိုက်တယ်..။ “ နင့်…..နင့်သူငယ်ချင်း ကျော်သိန်း လေ….ငါ့…ငါ့ကို ရက်စက်သွားတယ်….ဟင့်..ဟင့် ဟင့်……… ” ပြောလဲ ပြော ငိုလဲ ငို ခင်နွဲ့ဟာ ကျုပ်ကို ဖက်ပြီး ငိုတော့တာပဲ။ ကျော်သိန်းနဲ့ သူနဲ့ ကြိုက်နေတာ ကျုပ်သိတယ်။ အခု ကျော်သိန်းက အနောက်ပိုင်းက ဒေါ်ဘုမ သမီးကို ခိုးပြေးသွားပြီလေ…။ “ ခင်နွဲ့ကလဲ….ဟာ မငိုပါနဲ့…..သူကမှ ကိုယ့်ကို မခင်တာ…ဂျင်းစိမ်းနဲ့ မိတ်သလင်ပဲပေါ့…..နင်ကလဲ… ” “ ဟင့်…ဟင့်..ငါအရမ်း ဝမ်းနည်းတယ်…… ” ခင်နွဲ့က ကျုပ်ကိုယ်လုံးကြီးကို အတင်းတိုးဖက်ပြီး ကျုပ်ရင်ဘတ်မှာ မျက်နှာအပ်ပြီး ငိုနေတယ်။ အဲ…သူ့လက် တစ်ဖက်က ကျုပ်ပေါင်ပေါ် တင်ထားတဲ့ ကျုပ်လက်ကို လာကိုင်တယ်။ ကိုင်တာက ကျုပ်လက်ဖမိုးကို သူ့လက်ဖဝါးနဲ့ အုပ်ပြီး ကိုင်တာ။ ဖြစ်ချင်တော့ ပေါင်ပေါ် တင်ထားတဲ့ ကျုပ်လက်ဖျားက ကျုပ်ပေါင်ရင်းခွကြားပေါ်မှာ ရောက်နေ တာ။ သူက ကျုပ်လက်ဖမိုးကို အုပ်ကိုင်လိုက်ပြီး ဆုပ်လိုက်တော့ သူ့လက်ချောင်းလေးတွေက ကျုပ်လက်ရဲ့ အောက်ဖက်ကို ကွေးဝင်သွားပြီး ပုဆိုးထဲက ကျုပ်ရွှေပန်းကြီး ထိပ်ကို သွားထိတယ်…။ “ ဟင့်ဟင့်….သာဟန်ရယ်….ငါ…ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ…..အဟင့်….ဟင့်….. ” သူ့ကိုယ်လုံးလေးက တသိမ့်သိမ့် ဖြစ်နေရာက သူ့လက်ချောင်းထိပ်တွေကလည်း ကျုပ်ရွှေပန်းကို ထလိုက် ထိုးလိုက်နဲ့ တို့တို့နေသလို ဖြစ်လာတယ်။
တစ်ကိုယ်လုံး သနပ်ခါးနံ့ မွှေးနေတဲ့ ခင်နွဲ့က ကျုပ်ကို သူ့ကိုယ်လုံး အိအိ ကြီးနဲ့ တစ်သားတည်း ဖြစ်အောင် အတင်းဖက်ထားပြီး ကျုပ်ရွှေပန်းထိပ်ကိုလည်း သူ့လက်ချောင်းထိပ်တွေနဲ့ လာလာပြီး ထိထိနေတော့ ဘယ်ဗျာ….ကျုပ် ရွှေပန်းကြီးက ထောင်းခနဲ ထလာတော့တာပေါ့ ဗျာ….။ “ အမလေး……ဘာကြီးလဲ… ” ခင်နွဲ့က ရုတ်တရက် ကျုပ်ကိုဖက်ထားတာကနေ ခွာလိုက်ပြီး တစ်ပြိုင်နက်ထဲမှာ ပေါင်ကြားထဲက ကျုပ်လက် ကို ဆွဲမ တဆက်ထဲ ထောင်ထလာတဲ့ ကျုပ်ဟာကြီးကို သူ့လက်နဲ့ ဖမ်းဆုပ်ပစ်လိုက်ပြန်ရော…။ စောစောက ဝမ်းနည်းပက်လက်ဖြစ်နေတဲ့ ခင်နွဲ့ဟာ ချက်ချင်းပဲ သွက်လက်ဖြတ်လတ်သွားပါတယ်..။ “ ဘာ…..ဘာ လဲ… ” ပြောလဲပြော ကျုပ်ဟာကြီးကို ဆုတ် ဆုတ်ပေးတော့ ပိုပြီးထလာ ကြီးလာတာပေါ့။ “ ငါ့…..ငါ့..ရွှေပန်းကြီး လေ..ဟာ… ” “ ဟယ်….အကြီးကြီးပဲ…..ပြစမ်း…မလုပ်နဲ့… ” သူက ပုဆိုးကို ဆွဲချွတ်မယ် အလုပ်၊ ကျုပ်ကလဲ ပုဆိုးကို အတင်း ဖိထားမိတယ်။ “ နင်ကလဲဟာ ငါတို့က သူငယ်ချင်းတွေပဲ…မရှက်ပါနဲ့…၊ ငါမမြင်ဖူးလို့ပါ… ” ခင်နွဲ့က ကျုပ်မျက်နှာကိုကြည့်ပြီး တောင်းတောင်းပန်ပန်ပြောရင်း သူ့လက်က ကျုပ်ရဲ့ ငေါထွက်နေတဲ့ ဟာ ကြီးကို သူ့လက်နဲ့ ပုဆိုးပေါ်ကနေ အုပ်ကိုင်ပြီး ဆုပ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ စောစောကလို ဖွဖွလေး ဆုပ်ဆုပ်ပေး နေပြန်တယ်။ ကျုပ်ရဲ့ ရွှေပန်းကြီးသာ ထောင်ထလာတာမဟုတ်ပဲ ကျုပ်ရဲ့ စိတ်တွေလည်း အတော်ထလာပြီ..။ ပြီးတော့ ကျုပ်က မိန်းမသာ မလုပ်ဖူးသေးတာ၊ ကာလသားကြီးတွေပြောတဲ့ မိန်းမအကြောင်းတွေ နားနဲ့ မဆန့် အောင် ကြားဖူးခဲ့ပြီး ကာလသားကြီးတွေ အိမ်တက်တော့ အဖော်လိုက်ပြီး ခဏခဏ ချောင်းဖူးတယ်။ နောက် ရကာစ လင်မယားတွေ တခြားလင်မယားတွေကိုလည်း သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အတူတူလိုက်ပြီး ချောင်းဖူးတယ်။ ဒီတော့ ကျုပ်လည်း ဘယ်ခေပါ့မလဲ…။ “ လုပ်ပါ သာဟန်ရာ…ငါကြည့်ချင်လို့ပါ….ခဏလေးပါ….၊ ဘယ်သူမှလဲ ရှိတာမှ မဟုတ်တာ… ” ကျုပ်ရင်ထဲမှာလဲ မောမောကြီးနဲ့ဗျာ။ ကျုပ်ခြောက်နေတဲ့ လည်ချောင်းကို တံတွေးမျိုချပြီး စိုသွားအောင် လုပ်လိုက်ရတယ်။ ပြီးမှ မော့ပြီး ပြောနေတဲ့ ခင်နွဲ့ရဲ့ မျက်နှာကို ငုံ့ပြီး စိုက်ကြည့်လိုက်တယ်..။ “ ကဲ ကဲ…ဒါလောက်ဖြစ်နေရင် …ငါ့ဟာလဲပြမယ်….နင်ကလည်း နင့်ဟာကို ပြ…ဘယ့်နှယ်လဲ…. ” “ အာ……နင်ကလဲ…… ” ကျုပ်တို့က ၁၂ နှစ် ၁၃ နှစ် ကလေးတွေ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ သိသိကြီးနဲ့ ဖြစ်နေကြတာပါ။ “ နင့်ဘက်ကျတော့ နင်ကသိပ်သိတာပဲ… ဒါဆို ငါလဲ မပြတော့ဘူး… ” “ ကဲ…..လာဟာ…အိမ်ရှေ့ကြီးမှာ ….မကောင်းဘူး…အထဲသွားမယ်… ” ခင်နွဲ့က ခေါက်ကာလိုက်ကာနဲ့ ကာထားတဲ့ အခန်းထဲကို ထပြီးဝင်သွားတော့ ကျုပ်လဲ နောက်က လိုက်ခဲ့ပါ တယ်။ သူဝင်သွားတဲ့ အခန်းက သူ့အစ်မလင်မယား အိပ်တဲ့ အခန်းပါ။ အထဲမှာ မွေ့ယာထူထူကြီးနဲ့ အိပ်ယာကြီးက အခန့်သား။ အိမ်အပြင်မှာက မှောင်နေပေမယ့် အထဲမှာက မှန်အိမ်လေး ထွန်းထားတော့ လင်းလင်းချင်းချင်း ရှိနေ ပါတယ်..။ အခန်းထဲလည်း ရောက်ရော ခင်နွဲ့က ကျုပ်ဘက်လှည့်ပြီး ရပ်လိုက်တယ်။ သူနဲ့ ကျုပ်က နှစ်တောင်လောက် လက်တစ်ကမ်းလောက်ပဲ ကွာတာ။ သူက ကျုပ်ကို ကြည့်နေရာက သူမျက်လုံးက ကျုပ်အောက်ဖက်ပိုင်းကို ရောက် သွားတယ်။ ကျုပ်လည်း မထူးတော့ဘူးဆိုတဲ့ သဘောနဲ့ ပုဆိုးကို ချွတ်ချလိုက်တော့တယ်
ဟယ်…..နည်းတာကြီး မဟုတ်ဘူး… ” ပြောလည်းပြော သူက ကျုပ်ရှေ့တိုးလိုက်ပြီး လက်က ကျုပ်ရဲ့ တောင်မတ်နေတဲ့ လီးကြီးကို လှမ်းကိုင်လိုက် တော့ တာပါပဲ။ ပြီးတော့ ဖွဖွလေး ကိုင်ထားရာကနေ လက်ညှိုးလက်မကို ကွင်းလေးလိုလုပ်ပြီး ရှေ့တိုးနောက်ငင်လုပ်ပေးတယ်။ ကျုပ်လီးကြီးက ပိုကြီးပြီး ပိုမာလာတာပေါ့။ တစ်ခါ ခင်နွဲ့က ထိပ်ဖျားထိရှိနေတဲ့ ကျုပ်လီးရဲ့ အရည်ခွံ ကို ဆွဲချလိုက်တာ ကျုပ်ဒစ်ကြီး ပေါ်လာတော့တာပဲ…။ “ နင်……နင်နဲ့ ရတဲ့ မိန်းမက….ကံကောင်းတာပဲ… ” တိုးတိုးလေး ညည်းသလိုပြောလိုက်တဲ့ ခင်နွဲ့ရဲ့ အသံလေးဟာ တုန်နေပါတယ်။ အသံ သာမဟုတ်ပဲ သူ့ တစ်ကိုယ်လုံးဟာလည်း တုန်ရင်နေပါတယ်…။ “ ကဲ…..နင် ဟိုဖက်လှည့်နေ….ငါက လှည့်ကြည့်ဆိုမှ လှည့်နော်…… ” ကျုပ်လည်း သူပြောတဲ့အတိုင်း နောက်ကို လှည့်နေလိုက်ပါတယ်။ ခဏနေတဲ့အခါမှာတော့ …… “ ရပြီ…..ဒီဖက်လှည့်တော့…… ” ဆိုတဲ့ အသံတိုးတိုးလေးကို ကြားလိုက်ရတော့ ကျုပ်လည်း နောက်ကို လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။ ဘာတွေလုပ် ဟာဗျာ ကိုယ်လုံးတီးနဲ့လေ ခေါင်းလေးငုံ့လို့ ပေါင်ကြားမှာ အမွှေးမဲမဲလေးတွေကြောင့် သူ့ဟာကိုတော့ ရှင်းလင်း အောင် သေချာမတွေ့ရပေမယ့် သူ့အပေါ်ပိုင်းက နို့နှစ်လုံးကတော့ ကျုပ်လက်သီးဆုတ်လောက်တောင် ရှိပြီး မာတင်း ပြီး ကလေးအမေတွေလို ပျော့တွဲမနေပဲ နို့သီးတွေက ကော့ထောင်တက်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။ သူ့တစ်ကိုယ်လုံး ကိုလည်း တွေ့လိုက်ရော ကျုပ်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမှန်း မသိလိုက်ဖူး။ လက်တစ်ကမ်းက သူ့ကိုဆွဲပြီး တအားကြုံးဖက် ပစ်လိုက်တာပေါ့။ သူကလည်း ကျုပ်ကို ပြန်ဖက်ထားတယ်လေ…။ “ သာ….သာဟန်….နင်….ကိုင်ကြည့်အုံးလေ…… ” ကျုပ်လဲ သူ့ကိုယ်ပေါ်မှာ ဖက်ထားတဲ့ ကျုပ်လက်တစ်ဖက်ကို ဖြုတ်ပြီး သူ့ပေါင်ကြားကို ထိုးနှိုက်ပြီး ကိုင်လိုက် ပါတယ်။ သူက ပေါင်ကားပေးတယ်။ ဘာတွေလည်း မသိဘူး ပေါင်ကြားမှာ ရွှဲရွှဲစိုနေပြီး သူ့အဖုတ်က ကျုပ်လက်နဲ့ တောင် မဆန့်ဘူး၊ အိပြီး ဘယ်လိုပြောရမလဲတောင် မသိဘူး ကိုင်လို့ကောင်းလိုက်တာဗျာ။ ကျုပ်ကလည်း သူ့အဖုတ် ကို ကိုင်ကောင်းကောင်းနဲ့ ကိုင်ပြီး ဆုတ်လိုက်ပွတ်လိုက် လုပ်တာပေါ့…။ ဒီအချိန်မှာပဲ သူက ကျုပ်ကိုဖက်ထားလျက်ကနေ ဘေးကမွေ့ယာကြီးပေါ် ထိုင်ချလိုက်တော့ ကျုပ်လဲ သူနဲ့ အတူ ထိုင်လျက်သား ကျသွားတာပေါ့။ ကျုပ်လက်ကတော့ သူ့အဖုတ်ကို မလွှတ်ဘူး။ ဘာမှန်းမသိတဲ့ အရည်တွေ က ပိုပိုပြီး များများလာတယ်။ ပြီးတော့ သူ့အဖုတ်ကြီးကလည်း ကျုပ်လက်ထဲမှာတင် ဖောင်းကြွတက်လာပြီး ပိုကြီး လာတယ်…။ ခဏလေး ထိုင်လျက်နေပြီးတော့မှ သူက ကျုပ်ကို ဖက်လျက်ကနေ မွေ့ယာကြီးပေါ်ကို ပက်လက်လှန်ချ လိုက်တော့ ကျုပ်လဲ သူ့အပေါ် မှောက်ရက်ပါသွားရပါတယ်။ ခင်နွဲ့က ပက်လက်လဲ ဖြစ်သွားရော သူ့မျက်လုံးနှစ်လုံးကို မှိတ်ပစ်လိုက်တယ်။ ကျုပ်လဲ အသိစိတ်ပျောက်သွားပြီး သူ့နို့နှစ်လုံးကို တစ်လုံးပြီး တစ်လုံး စို့ပစ်လိုက်တယ်။ ကျုပ်တို့ နှစ်ယောက်လုံး အသက်ရှူသံတွေ တရှူးရှူးနဲ့ ပေါ့ဗျာ….။ ခင်နွဲ့က နို့စို့ခံရင်းကနေ ကျုပ်ကို အောက်ကနေ ခွထားသလိုဖြစ်နေတဲ့ သူ့ပေါင်နှစ်လုံးကို ဆွဲထောင်လိုက်ပြီး ကားပေးလိုက်တယ်။ ကျုပ်လည်း မြင်ဖူးကြားဖူးထားတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေက နည်းတာမှ မဟုတ်တာ၊ မှောက်ရက်က နေ ဒူးထောက်လိုက်ပြီး တောင်မတ်နေတဲ့ ကျုပ်လီးကြီးနဲ့ သူ့ပေါင်ကြားကို ထိုးတော့တာပေါ့။ ကျုပ်မျက်နှာကတော့ သူ့ရင်ဘတ်ပေါ်မှာ နို့စို့မပျက်ဖူးပေါ့…။ လက်တွေ့ မလုပ်ဖူးတဲ့ ကျုပ်ရဲ့ လီးက တွင်းဝင်မဖြောင့်ပဲ ဟိုထိုးဒီထိုးနဲ့ ခင်နွဲ့ရဲ့ စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းကြီးတွေ ပေါင်ခြံတွေနဲ့ အကွဲကြောင်းထိပ်က ပုလဲပုတီးစေ့လောက်ရှိတဲ့ အစိကိုပါ ထိုးမိနေတာပေါ့။ ခင်နွဲ့ တရှူးရှူး တရှဲရှဲနဲ့ လူးလူးလွန့်လွန့် ဖြစ်နေပါတယ်။ ပြီးတော့ “ နဲနဲ…. ကြွလိုက် အုံး…… ” မောသံလေးနဲ့ ပြောလိုက်တော့ ကျုပ်က ကိုယ်လုံးကို ကြွလိုက်တော့ လီးက သူ့အဖုတ်နဲ့ ကွာသွားတယ်။ အဲဒီမှာတင် သူ့လက်နှစ်ဖက်ဟာ သူ့ပေါင်ကြားထဲ ရောက်လာပြီး တစ်ဖက်က ကျုပ်လီးကို ကိုင်တယ်၊ တစ်ဖက်က သူ့စောက်ပတ်ကို ဖြဲပေးတယ်။
ကျုပ် ငုံ့ကြည့်လိုက်တော့ အဖုတ်ထဲက အသားလေးတွေက ရဲနေတာများ…ဗျာ…။ အဲသလို ဖြဲပြီးတာနဲ့ တခြားလက်တစ်ဖက်နဲ့ ကိုင်ထားတဲ့ ကျုပ်လီးကြီးကို သူ့စောက်ပတ်ဝမှာ တေ့ပေးလိုက်တယ်။ “ သွင်း….သွင်းတော့… ” “ ဗြစ်…..ဗြစ်…..ဖောက်….ဒုတ်…အ….အား…..အမလေး……အား.အား… ” သွင်းတော့ဆိုတာနဲ့ စိတ်မထိန်းနိုင်တဲ့ ကျုပ်ဟာ တအားဆောင့်ထိုးချလိုက်တာ လီးက တဆုံးဝင်သွားတယ်။ ခင်နွဲ့မှာတော့ အလန့်တကြားနဲ့ အော်ရင်း တစ်ကိုယ်လုံး ဆတ်ဆတ်ခါနေတယ်။ ကျုပ်လဲ ဘာလုပ်ရမှန်း မသိတော့ လီးတဆုံးသွင်းထားပြီး ငြိမ်နေမိတယ်။ ခင်နွဲ့က သူ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ကျုပ်လက်ကို လှမ်းဆွဲပြီး သူ့ကိုယ်ပေါ် ဆွဲချ တယ်။ ကျုပ်လဲ သူ့ကိုယ်ပေါ်ကို ရောက်သွားပြီး ခင်နွဲ့ရင်ဘတ်ကို မျက်နှာအပ်မိတာနဲ့ နို့နှစ်လုံးကို ပြန်စို့ပစ်လိုက်တယ်…။ ထိုခဏအတွင်းမှာပဲ ခင်နွဲ့ရဲ့ ဆတ်ဆတ်ခါနေတဲ့ ကိုယ်လုံးဟာ ငြိမ်ကျသွားပြီး သူ့လည်ချောင်းထဲက တအင်း အင်းနဲ့ ငြီးသံ ထွက်နေတယ်။ ပြီးတော့ စောက်ပတ်ထဲကို တဆုံးဝင်နေတဲ့ ကျုပ်လီးကြီးကို သူ့အဖုတ်အတွင်းသား တွေက လှုပ်စိလှုပ်စိနဲ့ ဖိဖိနေတယ်။ ကျုပ်လည်း မအောင့်နိုင်တော့ဘူး။ လီးကို ဆွဲထုတ်ပြီး ပြန်သွင်းကာ လိုးတော့ တာပါပဲ…။ “ ဗြစ်….ဖွတ်……ဖတ်……ဇွိ ….အင်…အင်း…….ဟင်….ဗြစ်…..ဗြစ်……….ဖွတ်……ပလွတ်……အား….အ…”ခင်နွဲ့ဟာ မျက်လုံးမပွင့်တော့ပါဘူး။ တအင်းအင်းနဲ့ ငြီးပြီး ကျုပ်ဆောင့်ချက်တွေကြောင့် သူ့ကိုယ်လုံးလေးဟာ တလှုပ်လှုပ် ဖြစ်နေတော့တာပေါ့။ ကျုပ်လဲ မှောက်ရက်ကနေ ဆောင့်ရတာ အားမရတော့ဘူး။ ဒါနဲ့ ကျုပ်ကိုယ်ကို ခင်နွဲ့အပေါ်ကနေ ခွာပြီး ထလိုက်ရာက လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ခင်နွဲ့ နို့နှစ်လုံးကို ဆွဲဆွဲပြီး စိတ်ရှိတိုင်း ဆောင့်လိုးပစ်လိုက် ပါတယ်…။ လိုးရင်းကနေ ခင်နွဲ့ စောက်ပတ်ထဲ ဝင်လိုက်ထွက်လိုက် ဖြစ်နေတဲ့ ကျုပ်လီးကြီးကို ငုံ့ငုံ့ကြည့်မိတယ်။ သူ့အထဲက အရည်တွေဟာ ရွှဲခနဲ ရွှဲခနဲ ထွက်ထွက်ကျလာလိုက်တာ မနည်းပါဘူးဗျာ။ အောက်ကမွေ့ယာ အိပ်ယာ ခင်းတောင် ရွှဲနေပြီ။ နောက်ပြီး ခင်နွဲ့ကလည်း လည်ပင်းကြောတွေ ထောင်သွားအောင် တအီးအီးနဲ့ ဖြစ်သွားပြီး သူ့ခေါင်းလေး ခါရမ်းသွားတာလည်း မကြာခဏပါဘဲ…..။ ( နောက် အတွေ့အကြုံ ရလာမှ စဉ်းစားမိတာ ခင်နွဲ့ ခဏခဏ ပြီးနေတာကိုး…..) ။ “ ပလွတ်….ဗြစ်….ဒုတ်…..ဖွတ်…အမလေး….သာဟန်…ရယ်…..အ..အ……ဗြစ်……အ…..ဒုတ်……အီး…” ကျုပ်တအားဆောင့်လိုးနေတဲ့ သူ့စောက်ပတ်တော့ မသိဘူး၊ ကျုပ်ကိုင်နေတဲ့ ခင်နွဲ့နို့နှစ်လုံးကတော့ ရဲရဲနီ လာတော့ တာပဲ…ဗျ။ စပြီးလီးဝင်တဲ့ အချိန်ကနေ တွက်ရင် ကွမ်းတစ်ယာညက်လောက် ကြာတဲ့ အချိန်မှာတော့ ကျုပ်လည်းဘယ် လိုဖြစ်တယ်မပြောတတ်ဘူး။ ဆောင့်အားတွေ တဖြေးဖြေး လျော့လာပြီး တစ်ကိုယ်လုံး ကတုန်ကရင် ဖြစ်လာ ရာက ဆတ်ခနဲ ဆတ်ခနဲ ကျုပ်ခါးက ကော့ကော့သွားပြီး လီးထိပ်က အရည်တွေ ပန်းထွက်ကုန်ပါလေရော။ ကောင်းလိုက် တာ ကျုပ်ဖြင့် ခင်နွဲ့ကို ကုန်းဖက်ပြီး အားရပါးရ နမ်းပစ်လိုက်တော့တယ်… ကျုပ်နဲ့ ခင်နွဲ့ဟာ အစရှိ အနောင်နောင်ဆိုသလို နှစ်ရက်ခြား သုံးရက်ခြား လူလစ်ရင် လစ်သလို လိုးခဲ့ကြတာ ပါပဲ။ နောက် ၃ လလောက်ကြာတဲ့ အခါမှာတော့ ကျုပ်သတင်းဆိုး တစ်ခု ကြားရပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ခင်နွဲ့ တစ်ယောက် သူ့ခဲအိုနဲ့ လိုက်ပြေးသွားပြီတဲ့…တစ်ရွာလုံးကလည်း အံ့သြနေကြတယ်။ ခင်နွဲ့အစ်မနဲ့ ခဲအိုက ရတာမှ တစ်နှစ်တောင် မပြည့်သေးဘူး။ အဲဒီမှာ စိတ်မကောင်းစရာဖြစ်ရတာက ခင်နွဲ့အစ်မ ဗိုက်တစ်လုံးနဲ့ ကျန်နေခဲ့တာပါပဲ။ အဲဒီတုန်းကတော့ ကျုပ်က ခင်နွဲ့ကို တော်တော်နှာကြီးတဲ့ ကောင်မလို့ ဆိုခဲ့တယ်။
နောက် အတွေ့အကြုံများလာတော့ သေသေချာချာစဉ်းစားကြည့်တော့ ဘယ်နှယ်ဗျာ တစ်အိမ်ထဲ မှာနေတဲ့ အစ်မနဲ့ ခဲအိုက ရကာစ ဘယ်လောက်တောင် လိုးနေလဲမှ မသိတာ၊ ဒါကို အနီးကပ် တွေ့မြင်ကြားသိနေရတော့ ခင်နွဲ့လည်း ခံစားကြည့်ချင်မှာပေါ့။ ညီအစ်မဆိုတာ ညီအစ်ကိုတွေလို မဟုတ်ဘူးဗျ။ မိန်းမသားတွေက စိတ်နုတယ် လေ။ အစ်မ ခံစားနေရတော့ သူလည်း ခံစားချင်လာမှာပေါ့…။ ဒါကြောင့် ရီးစားထားတော့လဲ ကျော်သိန်းက သူထန်တာကိုကြည့်ပြီး ကြောက်ပြေးတော့ ကျုပ်ကို ခင်နွဲ့က သူလိုတာ ဖြည့်ဆီးခိုင်းတယ်။ ကြည့်ပါလား သူ့အစ်မခံတဲ့ အိပ်ယာပေါ်မှာကို ခင်နွဲ့က တက်ခံပစ်တာ။ ကျုပ်ဆိုတာက အပြင်လူဗျ။ လူလစ်မှ တွေ့ရတာ။ လူလစ်အုံးတော့ ကျုပ်လဲ အား သူလဲ အားအုံးမှ အလုပ်ဖြစ်မှာ။ ဒီတော့ တစ်အိမ်ထဲ အတူနေ နီးစပ်တဲ့ သူ့ခဲအိုနဲ့ ဖြစ်တော့တာပေါ့…။ ကျုပ်သာ ဝတ္ထု ရေးတတ်ရင် ခင်နွဲ့ရယ်။ ခင်နွဲ့အစ်မနဲ့ ခဲအိုရယ် ကျုပ်ရယ်ကို ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်လောက် ရေးလိုက်ချင်ပါတယ်။ သာဟန်ရေ…..သာဟန်…..သာဟန် ရှိလား….. ” “ ရှိတယ်….လာပြီ…… ” ခြံဝက ခေါ်သံကြောင့် ကျုပ်ဟာ ထမင်းစားနေရာက လက်ဆေးပြီး ကမန်းကတန်း လက်သုတ်ကာ အိမ်ပေါ်မှ ပြေးဆင်းခဲ့ပါတယ်…။ “ အော်…..ဘယ်သူများတုံးလို့…ဒွေးလေးပု ပါလား… ” “ ဟုတ်တယ်….သာဟန်ရေ…..ဝိုင်းစိန် ကွင်းထဲသွားလို့ ထမင်းပို့မဲ့လူ မရှိလို့…အစကတော့ ငါသွားပို့မလို့ပဲ… အခု မတင်အေး ဗိုက်နာနေလို့ ငါ မသွားနိုင်တော့ဘူး… မယ်အေးတို့အိမ် သွားရအုံးမှာ….နင်သွားပို့ပေးပါလား… ” “ ဟုတ်ကဲ့…ဒွေးလေးပုပေး ထမင်းချိုင့် ဒါနဲ့ ဝိုင်းစိန်က ကွင်းထဲကို တစ်ယောက်ထဲ ဘာသွားလုပ်တာလဲ ” “ အိမ်မှာ သူ့အစ်ကို မရှိဘူး၊ မြို့တက်သွားတယ်..လယ်ထဲမှာ သူရင်းငှါးတွေ နောက်ချေးချတာကို အမေတို့ သားအမိ သွားကြည့်ပေးပါဆိုလို့…ဟေ့… ” ဒွေးလေးပု မကျေမချမ်း ပြောသည်
ကဲကျုပ် သွားတော့မယ်…နေတောင် အတော်မြင့်နေပြီ…ဝိုင်းစိန် ဆာနေရော့မယ်… ” “ အေး…..သွား သွား…နင်အလုပ်အားရင် ညနေ ဝိုင်းစိန် ပြန်မှ ပြန်လာခဲ့….. ” “ ဟုတ်ကဲ့ ဒွေးလေးပု….. ” ဒီလိုနဲ့ ကျုပ် ကွင်းထဲကို ထွက်လာခဲ့တယ်။ တဲရောက်တော့ တဲပေါ်ကနေ ခြေတွဲလောင်းချပြီး ထိုင်နေတဲ့ ဝိုင်းစိန်က ပြေးထွက်လာတယ်။ ပြီးတော့ ကျုပ်လက်ထဲက ထမင်းချိုင့်ကို ဆွဲယူတယ်။ ဝိုင်းစိန်က ပါးကွက်နဲ့ ဆံရစ် ဝိုင်းလေးနဲ့ လှနေတယ်…။ “ အမေ ကဘာလို့ မလာတာလဲ.. ” “ မယ်အေး ဗိုက်နာလို့တဲ့..ဟေ့… ” “ ဟိဟိ..ကိုသာဟန် ကြားထဲက အလုပ်ရှုပ်သွားတာပေါ့…ဟိ…. ” “ ကဲပါ….စားမှာ စားစမ်းပါ….ဟာ…. ” ကျုပ်လဲ တဲဝကသောက်ရေအိုးမှာ ရေတစ်ခွက်ခပ်သောက်ပြီး တဲပေါ်တက်ပြီး တုံးလုံးလှဲနေလိုက်တယ်။ ကျုပ်ရဲ့ ခြေထောက်နား ဘေးဖက်မှာ ဝိုင်းစိန်ကတော့ ထမင်းချိုင့်တွေ ဖြုတ်ပြီး စားနေလေရဲ့။ ထမင်းစားနေတဲ့ ဝိုင်းစိန်ကို ကြည့်ပြီး ကျုပ်စိတ်တွေ ဖောက်ပြန်လာတယ်။ ထိုင်ချထားတဲ့ ဝိုင်းစိန်ရဲ့ တင်းပါးအိအိကြီးတွေက ကား ကားကြီး။ ဘေးစောင်းမြင်နေရတဲ့ သူ့ရင်သားတွေကလည်း ခပ်ထွားထွား။ ကျုပ်က မိန်းမလုပ်ဖူးပြီး ပြတ်နေတာ တစ်လလောက် ရှိသွားပြီ။ ခင်နွဲ့ သူ့ခဲအိုနဲ့ လိုက်ပြေးသွားကထဲက ပြတ်နေတာ…။ ဒီတော့ ကျုပ်သွေးသားတွေက လှလှ တောင့်တောင့်ကို တွေ့လိုက်ရတော့ သွေးဆာလာတာပေါ့။ ဝိုင်းစိန်က ကျုပ်ထက် နည်းနည်း ငယ်တယ်။ တောသူဆိုတော့ အလုပ်ကြမ်းလုပ်တဲ့ အခါ လုပ်ရပြီး၊ အစားအသောက်ကလည်း လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် အလျှံအပယ်ဆိုတော့ ခန္ဓာကိုယ်က ထွားကြိုင်းတာပေါ့…။ ဝိုင်းစိန်ကို ကြည့်ရင်း ကျုပ်လီးကြီးက ပုဆိုးထဲမှာ ဖြစ်ချင်တိုင်း ဖြစ်နေတယ်။ ကျုပ်ကြည့်နေတာကို တွေ့နေရ တဲ့ ဝိုင်းစိန်က ကွက်ကြည့်ကွက်ကြည့်လုပ်ပြီး ပြုံးပြုံး ပြနေတယ်…ဗျ။ ဆိတ်ကွယ်ရာ ရောက်နေကြတာကိုး။ အဲ… ပြောဖို့တစ်ခု ကျန်သေးတယ်။ ကျုပ်တဲထဲ အဝင်မှာ လယ်ထဲကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ သူရင်းငှါးတွေက တစ်ခေါ် လောက်မှာရှိတဲ့ လယ်ကွက်တွေထဲမှာ နောက်ချေးတွေ ချနေကြတယ်။ ကျုပ်တို့နဲ့ တော်တော်လှမ်းပါတယ်။ ဒီတော့ ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်စလုံး အတွက် ဆိတ်ကွယ်ရာ ဖြစ်နေတာပေါ့။ ဒီဆိတ်ကွယ်ရာ အခြေအနေကြောင့်လည်း ကျုပ်ရဲ့ သတ္တိတွေဟာ ပိုပြီး ရှိလာတာပေါ့။ ဝိုင်းစိန်က ထမင်းစားပြီးလို့ ချိုင့်တွေ ပြန်ဆင့်ပြီးတာနဲ့ ကျုပ်လှဲနေတဲ့ အနားလာပြီး ထိုင်တယ်
အစ်ကိုသာဟန် ပြန်လို့ရပြီ…အားနာလိုက်တာ..အမေတို့များ အားလားမအားလား မသိဘူး… ” “ ငါက အားနေတာပါဟ…ဒွေးလေးပုက ညနေနင်ပြန်မှ အတူပြန်လာဖို့ ငါ့ကို မှာလိုက်တယ်.. ” “ ဟာ…အမေတို့ကတော့ လုပ်လိုက်ပြန်ပြီ…တစ်ဖက်သား အားနာစရာ..ဒီမှာ ဘာကြောက်စရာ ရှိလို့လဲ… ” “ အံမယ်…ကြောက်စရာ တကယ် မရှိဘူးလား… ” ပြောလဲပြော ကျုပ်ကလှဲနေရာ ထထိုင်လိုက်တော့ ဝိုင်းစိန်နဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် ဖြစ်သွားတယ်..။ “ မရှိပါဘူး..အကုန်လုံး တစ်ရွာထဲသားတွေဘဲ…အကြောင်းသိတွေချည်းပဲ….ဟာ… ” “ ဒါဆို …. ငါ့ကိုရော မကြောက်ဘူးလား…. ” “ အဟပ်….အစ်ကို့ဆို ဝိုင်းစိန်က ပိုတောင် မကြောက်သေး…..မကြောက်သေး….အဟက်….ဟက်… ” “ မကြောက်ရင်…..ကဲ…ကဲ….. ” “ အိုး…..လွှတ်…လွှတ်… ” ကျုပ်က ဝိုင်းစိန်ကို အတင်းဖက်ပြီး နမ်းတယ်။ သူက လွှတ်လွှတ်ဆိုပြီး ရုန်းတယ်။ ဘယ်ရမလဲ ယောက်ျား အားနဲ့ ဆိုတော့ သူဘယ်ရုန်းနိုင်မလဲ…။ “ လွှတ်…..လွှတ်ပါဆို… ” ဝိုင်းစိန်ကို လက်တစ်ဖက်နဲ့ အားကုန်ဖက်ထားပြီး တစ်ဖက်က သူ့နို့ကြီးတွေကို ကျုပ်လက်ဖဝါးနဲ့ အုပ်ကိုင်ပြီး ညှစ်တယ်။ ဝိုင်းစိန်က ဖျင်အင်္ကျီဝတ်ထားတဲ့ အပြင် အထဲကပါ ဘော်လီအင်္ကျီရှိတော့ ပိုပြီး အားထည့်ညှစ်တယ်။ သူ့တင်သားကြီးတွေကို တအားတအား လိုက်ညှစ်ပစ်တယ်…။ “ လွှတ်…လွှတ်ပါအစ်ကိုရယ်…ဝိုင်းစိန် တောင်းပန်ပါတယ်…. ” မရပါဘူး ကျုပ်လီးက အထဲမှာ အတော်မာတောင်နေပြီ။ ကျုပ်က နမ်းချင်တိုင်း နမ်းပြီး ကိုင်ချင်တိုင်း ကိုင်နေ တော့တာ….။ “ ကျွတ်…ခက်တာပဲ… ” ခဏကြာတော့ ကျုပ်က သူ့ကိုလွှတ်ပေးလိုက်တယ်။ ဝိုင်းစိန်မျက်နှာတစ်ခုလုံး နီရဲနေပြီး ပါးနှစ်ဖက်က ပါးကွက်လေးတွေလည်း မရှိတော့ဘူး။ မောနေတယ်
ဟွန်း…..တော်တော်ဆိုး…..ဒီမှာ ရင်ထဲကို ဖိုးသိုးဖတ်သပ်ကြီး ..နေရခက်လိုက်တာ… ” ကျုပ်လဲ အကြံရသွားတာနဲ့… “ ငါလည်း…နင့်လိုပါပဲ ဟ….ဒီမှာ ကြည့်ပါအုံး… ” ပြောလည်း ပြော ကျုပ်က ပုဆိုးခါးပုံစကို ဆွဲဖြုတ်ပြီး ချွတ်ချလိုက်တယ်..။ “ အို…… ” တောင်နေတဲ့ ကျုပ်လီးကြီးကိုလဲ မြင်ရော ဝိုင်းစိန်မျက်လုံး အဝိုင်းသားနဲ့ ကြည့်ပြီး ကြက်သေသေသွားတယ်။ ကျုပ်လီးက ခင်နွဲ့ကို သုံးလလောက် လိုးခဲ့လို့ အပေါ်အရည်ခွံက ထိပ်မှာ မရှိတော့ပဲ နှီးတစ်ပြားလောက် လန်နေပြီ။ ဝိုင်းစိန် ကြက်သေ သေသွားတဲ့ အခိုက်မှာပဲ ကျုပ်က သူ့ကို ပြန်ဖက်ပြီး ကျုပ်ကိုယ်နဲ့ ဖိပြီး လှဲချတယ်။ “ အိုအို….မလုပ်နဲ့…..အဟင့်…ဟင့်..ဟင့်…… ” ဝိုင်းစိန် ငိုပါပြီ။ ရုန်းတော့ မရုန်းတော့ဘူးဗျ။ ဝိုင်းစိန် ပက်လက်လန်သွားတယ်ဆို ကျုပ်က သူ့ပေါ်တက်ခွ တော့တာဘဲ။ ကျုပ်လီးကြီးကတော့ သူ့ကိုယ်လုံးလေးကို ဟိုထိုးဒီထိုးနဲ့ ဖြစ်နေတယ်။ ခွမိတာနဲ့ ဗိုက်ကြွပြီး စောစော က ရုန်းရင်းကန်ရင်းနဲ့ လျော့ရဲရဲ ဖြစ်နေတဲ့ သူ့ထမီကို ဆွဲချွတ်လိုက်တယ်..။ ဝိုင်းစိန် မျက်လုံးမှိတ်ချလိုက်တယ်။ ထမီကို အကုန်ချွတ်မနေတော့ပါဘူး။ ဒူးဆစ်လောက်အထိပဲ ချွတ်တယ်။ ကျုပ်ငုံ့ကြည့်လိုက်တော့ အမွှေးနုနုလေးတွေနဲ့ စောက်ပတ်ကြီးက ဝင်းအိနေတာဘဲ။ ခင်နွဲ့စောက်ပတ်ထက် ပိုပြီး လှတယ်။ ကျုပ်က လက်ဝါးနဲ့ အုပ်ပြီး ရွရွလေး ပွတ်ပေးလိုက်တယ်..။ “ အဟင့်….အဟင့်…… ” ဝိုင်းစိန် တစ်တွန့်တွန့် ဖြစ်သွားရာက စေ့ထားတဲ့ ပေါင်ဖွေးဖွေးကြီးနှစ်လုံးက ဟသွားတယ်။ ဒီမှာတင် ကျုပ်က တောင်နေတဲ့ လီးကို စောက်ပတ်ဝမှန်းပြီး တေ့ထောက်လိုက်တယ်။ ဝိုင်းစိန် ဆတ်ခနဲ တုန်သွားတယ်။ တေ့ပြီးတာနဲ့ ခင်နွဲ့ကို စလိုးတုံးကလို အတင်းဆောင့်မထည့်ပဲ လီးကို ဆတ်ခနဲ ခပ်ဖြေးဖြေး ဆောင့်သွင်းလိုက်တယ်..။ “ အမေ့… ဝိုင်းစိန် ခါးကော့တက်သွားတယ်။ သူ့ဟာထဲမှာလဲ အရည်တွေ ရွှဲနေပါလား။ လီးက ခေါင်းတစ်ခုလုံး ဝင်သွား တယ်။ ကျုပ်က ဆက်ပြီး ဖြေးဖြေးပဲ ဖိဖိသွင်းတယ်…။ “ ဗြစ်…ဗြစ်……ဗြစ်.ဖွတ် အမလေး…..အမေ့……အ….အ…….အမေ့… ” ဝိုင်းစိန်ကတော့ ခါးလေးကော့လိုက် ရင်လေးကော့လိုက်နဲ့ပေါ့။ အသားလေးတွေလည်း တဆတ်ဆတ် တုန် နေတယ်။ လီးတစ်ဝက်နီးပါးလောက် ဝင်သွားပြီးတော့ အထဲမှာ ဘာခံနေတယ် မသိဘူး၊ လီးက ဆက်မဝင်ဘူး ဖြစ် နေတယ်။
ဒါနဲ့ ကျုပ်က လီးကို ခပ်ဖြေးဖြေး ဆွဲထုတ်ပြီး အားနဲနဲ ထည့်ပြီးဆောင့်ချလိုက်တယ်…။ “ ဗြစ်…ဖွတ်……ဖေါက်…..အမေရေ……အားအား…..” အားထည့်တာ နဲနဲများသွားပြီး လီးက တဆုံးဝင်သွားတယ်။ အပျိုလေးမို့ အတော်နာသွားပုံရတဲ့ ဝိုင်းစိန်က တော့ မျက်နှာမဲ့ပြီး မျက်ရည်တွေ သွင်သွင်စီးကျပြီး တစ်ကိုယ်လုံးတုန်နေတယ်။ စောက်ပတ်ထဲ လီးတဆုံး ဝင်သွား ပြီဆိုတော့ ကျုပ်လဲ ဘယ်နေနိုင်တော့မှာလဲ၊ လီးကို ဆွဲဆွဲထုတ်ပြီး လိုးတော့တာပေါ့။ အစမို့ ခပ်ဖြေးဖြေးပဲ…ပေါ့…။ “ ဗြစ်….ဒုတ်….ပလွတ်….ဖွတ်….ဇွိ ..အင့်….အ….အား…ဟင့်…… ” တခဏအတွင်းမှာပဲ..သူ့အထဲမှာ အရည်တွေ ရွှဲနစ်လာပြီး ဝိုင်းစိန်လဲ ငိုတာရပ်သွားတယ်။ ပြီးတော့ သူ့လက်တစ်ဖက်က ကျုပ်လက်မောင်း တစ်ဖက်ကို လှမ်းဆွဲပြီး တအားညှစ်ကိုင်ထားတယ်။ ပေါင်နှစ်ဖက်ကိုလည်း ပိုပြီး ကားပေးလာတယ်။ ဝိုင်းစိန်က သူ့ကိုယ်လုံးလေး တသိမ့်သိမ့် တလှုပ်လှုပ်ဖြစ်နေတဲ့ကြားက စင်းကျနေတဲ့ သူ့မျက်လုံးနှစ်လုံးကို ဖြတ်ခနဲ ဖြတ်ခနဲ ဖွင့်ဖွင့်ပြီး ကျုပ်ကို ကြည့်တယ်။ ဝိုင်းစိန် ခံနိုင်ပြီဆိုတာနဲ့ ကျုပ်လဲ စိတ်ကို လွှတ်ပေးပြီး ဆောင့်လိုးတော့တယ်…။ “ ဗြစ်….ဒုတ်…..ဖွတ်….ပလပ်…..ဗြစ်….အဟင့်….အဟင့်……အ.အ……ဟင့်……အင့် ငယ်သာငယ်တယ်၊ တော်တော်သန်တဲ့ ကောင်မလေးဗျ။ လိုးနေတဲ့ ကျုပ်လီးကိုများ သူ့စောက်ပတ်နဲ့ ဆွဲဆွဲ ညှစ်လိုက်တာများ လီးကို တန့်ခနဲ တန့်ခနဲ ဖြစ်ဖြစ်သွားရတာပဲ။ ဒီလိုညှစ်တာက ကျုပ်ကို ကောင်းစေချင်လို့ ညှစ်ပေး တာလည်းပါတယ်။ ကာမအရသာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်တုံ့ပြန်မှုလည်း ပါတယ်ပေါ့…။ “ ပလွတ်…ဗြစ်…ဇွတ်……ဖွတ်…..ဒုတ်……အင့်…ဟင့်…ဟင့်… ” “ ကောင်းလား..ဝိုင်းစိန်… ” “ အင်း…..ဟင့်အင်း…သိဘူး… ” အသံလေးက ခရာတာတာလေး ကျုပ်လဲ အတော်ကောင်းလာတာကြောင့် ခပ်သွက်သွက်ကြီးကို ဆက်တိုက် ဆောင့်ပြီးလိုးရာက သုတ်လွှတ်လိုက်တော့တယ်။ သူလည်း ပြိုင်တူ ပြီးတယ်နဲ့ တူတယ်။ ကျုပ်လည်း သုတ်လွှတ် လိုက်ရော… “ အမလေး….အစ်ကို…အ………အိ..အမေ့… ” ဆိုပြီး ကော့ကော့တက်သွားရာက တွန့်တွန့်သွားပြီး တစ်ကိုယ်လုံး ခါဆင်းသွားတော့တာပါဘဲ…ဗျာ။ ကျုပ် အတွေ့အကြုံတွေ အများကြီး ကျန်သေးတယ်။ နောက်ကြုံရင် ပြောပြအုံးမယ်။ ခုတော့ ဒီလောက်နဲ့ပဲ ကျေနပ်တော့ဗျာ…။ ပြီးပါပြီ။